ဘာလဲဟ သူရိယအလင်း | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
၀င်္ကဘာလမ်းမှာရှိတဲ့ စာပေစိစစ်ရေးရုံးက ပုံနှိပ်မီဒီယာများကြားတွင်တော့ ဂျပန်ခေတ် ကင်ပေတိုင်ရုံးလိုပင် ကျော်ကြား၏။ စကားလုံးတိုင်း၊ ၀ါကျတိုင်းအပြင် ဓါတ်ပုံ၊ ကာတွန်းပါ မကျန် သေချာစိစစ် ဖြတ်တောက်သည်။ လုံးဝ အမှားအယွင်းမခံ။
ရုံးတင်သည့် ဒုက္ခ၊ ရုံးကျ ပြန်မှတ်ရသည့် ဒုက္ခ၊ စာပြန်ပြင်ရသည့် ဒုက္ခ၊ ဖလင်ပြန်ထုတ်ရသည့် ဒုက္ခ ရေးလို့ပင် မကုန်။ များမြောင်လှသည်။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ဖြေလျော့မှုအဖြစ် စာပေစိစစ်ရေးသို့ တင်စရာမလို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခွင့် ရလားသည်။ ဒါပေသိ ပုံနှိပ်မီဒီယာများကား စည်းဝါးမလွတ်။ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်ကို စောင့်ထိန်းပြီး ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။
ထိုအချိန်တွင် မိုးဟိန်း ဆိုသူက ဦးစီးပြီး သူရိယအလင်း၊ သူရိယနေ၀န်း၊ အခု နောက်ဆုံး အာရှအလင်းဆိုပြီး ကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်းမှုမရှိ ဂျာနယ်ရောင်းကောင်းရုံ အဖွအရှုပ် အတင်းအဖျင်းများကို ဦးစားပေးပြီး ဂျာနယ်တစ်စောင် ထုတ်ဝေလာခဲ့သည်။
သူရိယအလင်းဂျာနယ်၏ ရေးသားမှုများသည် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နှင် မကိုက်ညီဟု မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ယက်က ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သလို The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော်၌ “ပြည်သူလူထုအတွက် မည်သည့်အကျိုးမျှမရှိဘဲ မိမိတို့၏ စာစောင်ရောင်းကောင်းရုံ အဖွအရှုပ် အတင်းအဖျင်းများ ရေးသားခဲ့သည့် ‘သူရိယနေ၀န်း’ ကဲ့သို့သော စာစောင်မျိုး၏ လုပ်ရပ်သည် ဒီမိုကရေစီကို အထင်သေးအောင် ပြုလုပ်သည့် Distortion of Democracy သာဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အရေးကြီးသော ပင်မဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းမှနေ၍ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် အာရုံလွှဲခြင်းဖြစ်သည်” ဟု ရေးသား သတိပေးခဲ့ကြသည်။
စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ပေးသည်ဟု ဆိုသော်လည်း အရေးအသား တင်ပြပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ စာနယ်ဇင်း မီဒီယာများကို တရားစွဲမှုများရှိခဲ့သလို အချို့မှာ နှစ်ရှည်ထောင်ကျခြင်းများပင် ရှိခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် တရားလက်လွတ် ပရမ်းပတာ ရေးနေသည့် သူရိယနေ၀န်း(အာရှအလင်း)ကဲ့သို့ ဂျာနယ်ကို ဘာကြောင့် အရေးမယူသလဲ စဉ်းစား၍မရပါ။ သူရိယနေ၀န်းက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပုတ်ခတ် ရေးသားနေသူများတွင် အငြိမ်းစား ယူသွားသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမှစ ခရိုနီများအလယ် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ၀န်ထမ်းများပင် ပါဝင်ပါသည်။
စာနယ်ဇင်း မီဒီယာများကို အရေးယူ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းများ ရှိနေသော်လည်း အာရှအလင်း မပါဝင်ခြင်းကို အံ့သြတကြီး ဖြစ်မိကြောင်းပါခင်ဗျား …..
This entry was posted in Artical, မြန်မာသတင်း and tagged 2014, Asia Alinn, စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်, မိုးဟိန်း, သူရိယအလင်း, အာရှအလင်း, မြန်မာသတင်းများ, Burma, Burma Blogger Shwe Htoo, Current Myanmar News, Ko Shwe Htoo, Media Ethic, Moe Hein, Myanmar News, Myanmar News Now, Thuriya Alinn on September 2, 2014 by koshwehtoo.
← ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းနောက်ကွယ်မှ Suspend Coffee →